Fa wo koma nyinaa dɔ Yehowa (1-9)
“O Israel, tie” (4)
Awofo nkyerɛkyerɛ wɔn mma (6, 7)
Mma wo werɛ mmfi Yehowa (10-15)
Monnsɔ Yehowa nnhwɛ (16-19)
Monka nkyerɛ nkyirimma (20-25)
6 “Eyi ne mmara nsɛm, ahyɛde, ne atemmusɛm a Yehowa mo Nyankopɔn aka sɛ memfa nkyerɛkyerɛ mo, na sɛ mutwa kɔ asaase a morekɔfa no so a, moadi so. 2 Ɛbɛma moasuro Yehowa mo Nyankopɔn na mo ne mo mma ne mo mmanana adi n’ahyɛde ne ne mmara a merekyerɛkyerɛ mo yi nyinaa so+ mo nkwa nna nyinaa, na moanyin akyɛ.+ 3 Enti Israel, tie na hwɛ sɛ wobɛyɛ ne nyinaa na asi wo yiye na asaase a nufusu ne ɛwo abu so wɔ so no, w’ase atrɛw wɔ so, sɛnea Yehowa w’agyanom Nyankopɔn ahyɛ wo bɔ no. 4 “O Israel, tie: Yehowa yɛn Nyankopɔn yɛ Yehowa baako.+ 5 Fa wo koma nyinaa ne wo kra* nyinaa+ ne w’ahoɔden nyinaa dɔ Yehowa wo Nyankopɔn.+ 6 Ma mmara nsɛm a mereka akyerɛ wo nnɛ yi nna wo koma so, 7 na fa dua wo mma komam,*+ na ka ho asɛm bere a wote wo fi, bere a wonam kwan so, bere a woda hɔ, ne bere a woasɔre.+ 8 Fa kyekyere wo nsa na akae wo, na fa yɛ ade* a wode bɔ wo moma so.*+ 9 Kyerɛw gu wo fi apongua ne w’aponkɛse* ho. 10 “Afei sɛ Yehowa wo Nyankopɔn de wo du asaase a ɔkaa ntam kyerɛɛ w’agyanom Abraham, Isak, ne Yakob sɛ ɔde bɛma wo no so,+ na ɔma wo nkurow akɛse fɛfɛ a ɛnyɛ wo na wokyekyee,+ 11 afi a nneɛma pa ahorow nyinaa bi ayɛ mu ma a ɛnyɛ wo na woyɛɛ ho adwuma, mmura a ɛnyɛ wo na wutui, ne bobefuw* ne ngo nnua a ɛnyɛ wo na wuduae, na sɛ wudidi mee a,+ 12 hwɛ yiye na wo werɛ amfi Yehowa+ a oyii wo fii nkoafi wɔ Egypt asaase so bae no. 13 Yehowa wo Nyankopɔn na ɛsɛ sɛ wusuro no,+ na ɔno na ɛsɛ sɛ wosom no,+ na ne din na fa ka ntam.+ 14 Ɛnsɛ sɛ mukodi anyame foforo akyi; munnkodi aman a atwa mo ho ahyia no anyame no biara akyi,+ 15 efisɛ Yehowa mo Nyankopɔn a ɔwɔ mo mfinimfini no yɛ Onyankopɔn a ɔmpɛ sɛ wɔsom obiara ka ne ho.+ Anyɛ saa a, Yehowa mo Nyankopɔn bo befuw mo denneennen+ na watɔre mo ase afi asaase so.+ 16 “Monnsɔ Yehowa mo Nyankopɔn nnhwɛ+ sɛnea mosɔɔ no hwɛe wɔ Masa no.+ 17 Yehowa mo Nyankopɔn mmara ne ne nkaesɛm ne n’ahyɛde a ɔde ama mo no, monhwɛ nni ne nyinaa so. 18 Monyɛ nea ɛteɛ ne nea eye wɔ Yehowa ani so, na asi mo yiye, na moatumi akɔfa asaase pa a Yehowa kaa ntam sɛ ɔde bɛma mo agyanom no.+ 19 Na mobɛpam mo atamfo nyinaa afi mo anim sɛnea Yehowa ahyɛ bɔ no.+ 20 “Daakye sɛ mo mma bisa mo sɛ, ‘Na nkaesɛm, ahyɛde, ne atemmusɛm a Yehowa yɛn Nyankopɔn de maa mo yi nso kyerɛ dɛn?’ a, 21 monka nkyerɛ wɔn sɛ, ‘Ná yɛyɛ Farao nkoa wɔ Egypt, ɛnna Yehowa de nsa a ɛyɛ den beyii yɛn fii Egypt. 22 Enti Yehowa de nsɛnkyerɛnne ne anwonwade akɛse a ɛyɛ hu baa Egyptfo ne Farao ne ne fifo nyinaa so wɔ yɛn anim.+ 23 Na oyii yɛn fii hɔ baa ha sɛ ɔde asaase a ɔkaa ho ntam kyerɛɛ yɛn agyanom no rebɛma yɛn.+ 24 Ɛnna Yehowa de mmara yi nyinaa maa yɛn sɛ yenni so na yensuro Yehowa yɛn Nyankopɔn na asi yɛn yiye daa+ na yɛatena nkwa mu+ sɛnea ɛte nnɛ yi. 25 Sɛ yɛhwɛ di mmara nsɛm yi nyinaa so de yɛ osetie ma Yehowa yɛn Nyankopɔn sɛnea waka akyerɛ yɛn no+ a, ɛbɛma yɛayɛ atreneefo.’
^ Anaa “na tĩ mu kyerɛ wo mma; na si so dua kyerɛ wo mma.”
^ Nt., “w’aniwa ntam.”
^ Anaa “wo kurow apon.”